Daraasad: MDMA ee Daaweynta Khamriga waxay Muujineysaa 80% Hoos udhaca Isticmaalka Daroogada Inc.eu
Natiijooyinka waxay muujinayaan in MDMA loo isticmaali karo daaweynta khamriga iyo in daaweynta MDMA ee laga caawiyay ay ka waxtar badan tahay dhammaan daaweynta hadda loo isticmaalo in lagu daweeyo khamriga ilaa maanta.
Sanado badan oo tijaabo ah iyo qalad kadib, dawooyin badan oo madadaalo ah ayaa hada dib loo baaray si loo tijaabiyo jiritaankooda ku saabsan daaweynta PTSD, walwalka iyo xaaladaha kale ee halista ah, iyo kuwo kale. Tusaale ahaan, daroogada xisbiga loo yaqaan MDMA - aka 3,4-methylenedioxymethamphetamine - waa mid ka mid ah.
Baarayaasha waxay ku howlan yihiin sharciyeynta daroogada iyo soo nooleynta adeegsiga caafimaad, gaar ahaan daaweynta PTSD. Hadda dhakhtarka maskaxda Ben Sessa iyo koox cilmi baarayaal Ingiriis ah ayaa daraasad cusub helay la daabacay kuwaas oo sharaxaya doorka daaweynta MDMA ee daaweynta iyo maaraynta Qalalaasaha Isticmaalka Aalkolada.
Cilmi-baarista, ayaa lagu daabacay Jareecada Cilmi-nafsiga, Warbixinno ku saabsan daraasad caafimaad oo heer sare ah oo muujinaysa awoodda MDMA ee daweynta khamriga iyo daaweynta nafsaaniga ah ee daaweynta dadka qaba khamriga. In kasta oo ay weli tahay daraasad yar, haddana waa tii ugu horreysay ee lagu baaro daaweynta MDMA sidii daaweyn loogu talagalay balwadda.
Natiijooyinka waxay muujinayaan in daaweynta MDMA ay tahay mid amaan ah, si wanaagsan loo dulqaatay, oo aad uga waxtar badan daaweyn kasta oo hada loo isticmaalo la dagaalanka khamriga.
Daraasada ku saabsan MDMA ee daaweynta khamriga ayaa lagu sharaxay natiijooyinka kahor iyo kadib
Si loo sameeyo daraasaddan caddaynta-fikradda ah, cilmi-baarayaashu waxay qoreen 14 maaddo oo ka cabanaya AUD si ay u dhisaan astaan ​​nabadgelyo oo loogu talagalay daaweynta MDMA. Daaweyntu waxay qaadatay sideed usbuuc iyada oo 10 kalfadhi oo daaweyn maskaxeed ah. Sideed kalfadhi waxay ahaayeen ballamo saacad ah oo teraabiyada cilminafsiga ah, halka labada kale ay ahaayeen hal maalin oo daaweyn MDMA ah.
Cilmi baarayaashu waxay soo sheegeen inaysan jirin wax falcelin ah oo liddi ku ah daawooyinka inta lagu gudajiro kalfadhiyada daaweynta ama maalmaha ka dambeeya. Ka sokoow soo gudbinta dulqaadka iyo badqabka sare, daraasadu waxay shaaca kaqaaday natiijooyin muhiim ah - oo ay kujirto waxa loogu yeero "Talaado xun".
Daraasada ku saabsan MDMA ee daaweynta khamriga ayaa lagu sharaxay natiijooyinka kahor iyo kadib (afb.)
Dhacdadan daaweyn ee uu isticmaaluhu la kulmo niyadda xun laba ilaa saddex maalmood ka dib isticmaalka MDMA waxaa soo wariyay isticmaaleyaasha madadaalada sanado badan. Iyadoo la kormeerayo niyadda mowduuc kasta toddobo maalmood ka dib cashar kasta, cilmi baarayaashu waxay arkeen inaysan haysan daroogadan daroogada ka dib. Tani waxay soo jeedinaysaa in "Salaasada xun" ay sababi karto adeegsiga dawooyinka badan iyo waxyaabo kale oo wareerinaya halkii ay ka ahaan lahayd MDMA lafteeda, ayay cilmi-baarayaashu qiyaaseen.
Intaa waxaa dheer, natiijooyinka waa kuwo aad u fiican: marka la barbardhigo celcelis ahaan unugyada 130 khamriga sida caadiga ah waxay cabaan maaddo kasta usbuucii bilawga daraasadda, kaliya wax ka yar 21 boqolkiiba kooxda ayaa wali cabtay in ka badan 14 unug oo khamri ah usbuucii sagaal bilood ka dib tijaabada.
In kasta oo tani dabcan ay tahay weli daraasad aad u hordhac ah, daraasado dheeraad ah oo ku saabsan waxtarka daaweynta MDMA ayaa socda. Waqtigaan la joogo, natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in markii looga faa'iideysto barnaamijka daaweynta daaweynta, MDMA loo isticmaali karo daaweyn rajo leh oo ku saabsan khamriga. Isticmaalka MDMA ee daaweynta khamriga waa mid rajo badan leh!
Ilaha ao Independent (EN), Xiisaha LehEN), SagePub (EN), Waqtiyada (EN)
CBD oo ah antibiyootiko loogu talagalay bakteeriyada super
Cadaadiska antibiyootikada ayaa ku sii kordhaya adduunka oo dhan. Taasi waa wax laga walwalo, ayay yiraahdaan saynisyahano u dhashay Australia oo ...
Ganacsiga daroogada ayaa la siidayn doonaa 14ka Luulyo Netflix
Goobaha ganacsiga ee daroogada waxaa laga heli doonaa Netflix laga bilaabo Luulyo 14 waana la qaban doonaa ...